Qindaa'inootni kee hunduu battalumatti olkaa'maniiru. Galfata kee babal'isuuf galfata kana lama cuqaasi yookiin mallatticha ida'uu cuqaasi. Galfata kee qoncoorsuuf, mallatticha hir'isuu cuqaasi yookiin galfaticha lama cuqaasi.
Qindaa'inoota dimshaashaa Fe'i/Olkaa'i ifteessa.
Afaanota dabalataaf amaloota qindeessa.
Qindaa'inootni kunneen karaa galmeeleen barruu kan LibreOffice keessatti uumaman qabataman qindeessu. Galmee barruu ammeetiif qindaa'inoota qindeessuun ni danda'ama.
Barreessaa LibreOffice /Web
Qindaa'inoota garaa kan galmeelee dhiyeessaa haaraa uumamanii kan akka qabiyyeewwan mul'atan, yuuniitii safaraa fayyadan, yoo fi akkaataa walqixxeessi tarsaa raawwatu qindeessa.
Qindaa'inoota hundataa galmeelee fakkisaa, qabiyyeewwan mul'atan, safara fayyadamnu, walqixxaata tarsaa fi qabiyyeewwan durtiin maxxansaman dabalatee qindeessa.
Title is: Dirqaalaalee